Tune: Ingiriisiga Cusub ee CBD Cab • Dawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn CBD Tune: cabitaanka cusub ee Ingiriisiga CBD
albaabka Ties Inc. January 30 2020
maqaal by Ties Inc. January 30 2020
Hannah Glasson, oo ka mid ah aasaasayaasha Sheekada PR ee caanka ah ee horumarisa cuntada iyo cabitaanka, ayaa soo saartay noocyo kala duwan oo cabitaannada CBD ah. Waxay samaysay cabitaanadan quruxda badan ka dib markay ogaatay faa'iidooyinka CBD inta lagu jiro daawaynta kansarka naasaha.
Cabitaankan cusub waxaa loo suuq geyn doonaa Boqortooyada Midowday iyadoo la adeegsan doono magaca In Tune waxaana laga heli karaa seddex dhadhan: grapefruit / mint, elderflower / hops iyo rummaanka / sinjibiil. Saddexda cabitaan ayaa la iibin doonaa bisha soo socota shirkadaha Fortnum & Mason iyo Planet Organic. 250ml ayaa ka gudbi kara miiska for 2,29.
Caafimaad cbd cabitaan
Mid kastaa wuxuu ka koobnaan karaa 10 milligaraam oo CBD ah taas oo noqon doonta qiyaasta ugu fiican ee diiradda la saarayo. Cabbitaannada sidoo kale aad bay u caafimaad qabaan. Gasacad In Tune ah ayaa ka kooban 4% sonkor iyo in ka yar 50 kaloori. Saldhiggu waxa uu ka kooban yahay biyaha guga ee kaarboonaysan oo lagu kabay soosaar CBD botanical ah iyo miir khudaar ah. CBD-da loo isticmaalo kala duwanaanta In Tune waxay ka timid hemp oo ka yimid Lithuania. Ubaxyada hemp ee la qalajiyey ayaa loo dhoofiyaa Ingiriiska oo loo beddelaa saliid habraac sidoo kale ka saaraya THC hemp (qaybta nafsiga ah ee xashiishadda).
Ma sugi karno inaan CBD dad badan u keeno. Imtixaanka, asxaabta, asxaabta iyo qoysku waxay ogaadeen in diirad saariddu ay ka mid tahay faa'iidooyinka muuqda ee ay soo mareen. Waxaan isticmaalay CBD intii lagu jiray daaweynta kansarka naasaha. Waxay iga caawisay inaan dareemo isku dheelitirnaan iyo wax soo saar waxayna ii oggolaatay inaan sii shaqeeyo markasta, ”ayuu yiri Glasson.
Akhri wax dheeraad ah thedrinksbusiness.com (Source, EN)
Mu'asasada Siyaasadda Daroogada waxay Bilaabaysaa Qorshaha Muwaadiniinta ee Loogu Tala Galay Sharci Ahaan Masuuliyada Daroogada